august 2021 - NorSom News
Laba sarkaal oo katirsan booliska Norway oo lagu eedeeyay dilka muwaadin Swedish ah.
Norsomnews - 30. august 2021
Norway: Taalibaan oo balan-qaaday in dadka heysta baasaboorka Norway ay bixi karaan.
Rashiid: Aragtida aan saxda aheyn ee ku saabsan in soomaalidu ay hal xisbi u wada codeeyaan.
Hussein: Dadka aan codeyn, waxaa codkooda loo qebiyaa xisbiyada.
Jawaab: Norway Qofku muxuu ku lumin karaa xaqiisa cod-dhiibashada?
Daawo wareysi Af soomaali ah: Jon Helgheim: afhayeenka arrimaha ajaaniibta ee xisbiga Frp.
Norsomnews - 28. august 2021
Norway oo soo qaaday Jamiila iyo haween kale oo aktifiistayaal ah.
Daawo: Diyaargarowga doorashada Norway iyo dareenka jaaliyada Soomaaliyeed ee Bergen.
Tønsberg: Tuug baabuurkii uu xaday ku dhex hurdooday oo ay boolisku qabteen.
Anders Breivik: Ninkii dilay 77-da qof oo maxkamada ka dalbanayo in xabsiga laga sii daayo.
Daawo: Hees: Ali Osman: Soomaalida Norway codkiina ku goosta cadkiina.
Norsomnews - 27. august 2021
Germany: Nin soomaali ah oo mindi ku dhaawacay xaaskiisa, sodohdiis iyo dad kale oo daris la ah.
Norsomnews - 25. august 2021
Daawo wareysiga iyo warbixinta sadex wiil oo walaalo ah oo ku dhintay shil gaari.
Xaqa codbixinta iyo su´aalihii gabdhaheyga: Aabe ma codaysay?
Norsomnews - 24. august 2021
MINST 18 DREPT DA OPPRØRERE ANGREP MILITÆRBASE I SOMALIA
Sadex(3) qof oo xalay ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay Hallingdal.